Somaliland: Xildhibaannadii U Codeeyay Talyanle Oo Ka Digay Fadhi Uu Maanta Goluhu U Ballamay, Baashe-na Ku Eedeeyay Inuu Dalka Mushkilad U Horseedayo - Wargane News
Home Somali News Somaliland: Xildhibaannadii U Codeeyay Talyanle Oo Ka Digay Fadhi Uu Maanta Goluhu...
Mudaneyaal ka tirsan Golaha Wakiillada Somaliland, ayaa sheegay in Baashe Maxamed Faarax uu ku Gacan-saydhay Talooyin uu u soo jeediyey Guddoomiyaha Golaha Guurtidu.
Mudaneyaashan oo kala ah Xildhibaan Xasan Muuse Hufane iyo Xildhibaan Siciid Warsame Gaane oo ka wada tirsanaa guddidii turxaan-bixinta ee garabka Cabdiraxmaan Talyanle oo Xalay warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa sheegay in fadhi Maanta la iclaamiyay oo lagu dooranayo guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiilladu ay keeni doonto burbur iyo dhibaato golaha u horseedda inuu noqdo laba garab.
Xildhibaannadan ayaa ku hanjabay haddii la joojin waayo fadhiga Maanta ee golaha wakiillada ay keeni doonto uu masuuliyaddeeda qaadan doono guddoomiyaha golahaas Baashe Maxamed Faarax oo doorashadiisu ay sal u tahay khilaafkan hadda taagan.
Ugu horeyn Xildhibaan Xasan Muuse Hufane oo ka hadlay shirka jaraa’id ayaa sheegay in Baashe Maxamed Faarax uu ku gacan-saydhay ergo uu ugu tagey guddoomiyaha guurtida Saleebaan Maxamuud Aaden . “Guddoomiyaha golaha guurtida waxaanu u sheegnay in Baashe iclaamiyay in brrri (maanta). Guddoomiye Saleebaan wuu ka hawl-galay arrinkaas, balse Baashe wuu ku gacan-saydhay, waxaanu yidhi waan qabanayaa shirkaas kooramkaygiina waan haystaa, waana diyaar, taasinay waxay u muuqataa in golihii wakiillada laba garab loo kala jabinayo, hadday taasi dhacdana annaga dhinacayaguna guddoomiye way leeyihiin, guddoomiye ku-xigeenkiina waanu dooranaynaa. Baashe waxaanu leenahay arrinta dhulka dhig.” ayuu yidhi Xildhibaan Hufane, waxaanu intaa ku daray “Sidaa darteed Berri (Maanta) waxaanu iclaaminaynaa wixii ka dhaca golahaas in Baashe iyo ragga dabada ka wada ay masuul ka yihiin labadaa garab ee loo qaybinayo golaha wakiillada.”
Xildhibaan Siciid Warsame Gaani ayaa isaguna dhiniciisa ku tilmaamay diidmada ergada ee Baashe Maxamed Faarax dhaqan ku cusub Somaliland. “Waxa dhacday arrin ugub ku ah Somaliland, waxaanay Somaliland dhaqan u lahayd inay sulux iyo wada-hadal ku dhamaysato wax walba, waxa inagu soo kordhay arrin cusub oo ah in guddoomiyihii guurtida oo ahaa kii mar walba loo noqon jiray iyo ergadii bulshada rayidka ahaydba la diiday, waxaanay u muuqanaysaa arrin cusub oo ah is-muquunin, iyadoo sharcigiina laga talaabsanayo.”
Xildhibaan Gaane ayaa farriin u diray shacabka, isagoo sheegay in fadhiga maanta ee goluhu uu horseedi karo burbur ku yimaada golahaas, waxaanu yidhi isagoo arrimahaas ka hadlaya. “Marka diido guurtidii, maxkamaddii iyo ergadiiba waxay muujinaysaa in waddanka meel kale lagu wado, waxaan shacabka iyo ciidamada qaranka ee kala duwan u sheegayaa arrintaa uu leeyahay Baashe Berri (maanta) guddoomiye ku-xigeen baa la dooranayaa, wixii arrintaas ka dhaca masuuliyaddeeda leh Baashe iyo ciddii dabada ka wada, waxaanay keeni doontaa wax Somaliland burburin kara.”